Lalao dimy hianarana hampiasa fitaovana famolavolana sary | Famoronana an-tserasera
Ireo mpamorona dia miasa tsy tapaka miaraka amin'ireo fitaovana ananany ao anatin'ny programa iray. Ahoana no mety ho Adobe na ny fianakaviana Affinity. Indraindray izy ireo dia manao izany amin'ny taratasy mba hampivelatra ilay hevitra ary amin'ny fotoana hafa dia tsy misy hevitra tavela intsony. Ireo lalao dimy ireo dia hitondra ny fotoananao malalaka sy hanatsara ny fahaizanao mandrafitra izay efa ananantsika.
Ny lalao nentin-drazana dia manana laza ratsy eo amin'ny sehatra rehetra. Mangalatra fotoana izy ireo, mandroba ny fahaizanao mamorona, manimba amin'ny lafiny rehetra izy ireo. Na izany aza, hevitra ankapobeny io. Satria araka ny hitantsika dia karazana lalao iray ihany no doka. Ady, fiara ary soccer. Ary indraindray dia traikefa nahafinaritra izay miafara amin'ny ady ihany koa. Nefa tsy toy izany daholo ny lalao rehetra.
Ity ny fanangonana kilalao dimy mahazatra izay hanampy anao hanatsara ny fahaizanao mamolavola, ary hahafahanao mifalifaly eny am-pandehanana. Satria amin'ny faran'ny andro, raha tsy mahafinaritra dia tsy misy milalao. Ary hamafisiko indray ny fahafinaretan'izy ireo, satria 'fanindronana'ny mpilalao mba hahazo isa hatrany.
1 Karazana karazana
2 Ny lalao Bézier
4 Hex Invaders
5 Alefaso ny typeface Serif
Izaho manokana dia iray amin'ireo lalao manintona ahy indrindra io. Amin'ny karazana Kern sarotra ny maminavina ny fametrahana ny endritsoratra tsirairay napetrany taminao. Tsy maintsy afindrao ny taratasy tsirairay havia na havanana mba hifanaraka amin'ny toerany. Raisina an-tsaina fa na ilay eo am-pamaranana dia tsy mihetsika na ilay eo am-piandohana. Ary hametraka ny isa anao amin'ny farany izany sy amin'ny toerana tokony hisy azy. Raha mbola tsy nanam-bintana ianao nahazo izany. Manome anao ny mombamomba ny typeface tsirairay sy ny endriny samihafa, izay mahatadidy ihany koa ny litera samihafa raha toa ka mila azy ireo indray andro ianao.
Ny lalao Bézier
Manampy betsaka ity lalao ity. Raha niresaka momba ny lesona hafa izahay eto Creativos Online, sarotra ny fitaovana penina. Indrindra ho antsika rehetra izay nanomboka. Izany no antony hanampian'ity lalao ity anao hahalala ny fomba ampiasana azy sy ny dikan'ireo teboka ireo. Ho fanampin'ny lakile hianarana ny fomba fampiasana ity fitaovana ity amin'ny fomba hafa.
Ho ahy ny lalao sarotra indrindra amin'ireo dimy izay hasehontsika amin'ity lahatsoratra ity. Milalao ny fandrefesana sy ny fitaovana izahay Tabilao mahitsizoro. Pixactly dia mizaha ny fisainanao piksela sy ny refin'ny efijery amin'ny fampianarana anao ny refy. Avy eo ianao dia voatendry hamokatra mahitsizoro miaraka amin'ireo refy takiana.
Raha vao manomboka milalao ianao dia tsy te-hijanona. Fa ny fanitsiana azy io dia tena sarotra, farafaharatsiny tsy misy fitaka. Aza mandeha photoshop hijerena azy! Mihetsika haingana ary zarao amin'ny tambajotra sosialy ny valiny!
Ho avy ety an-tany ny vahiny! Tsy maintsy mailo ny tafikao handrava azy ireo alohan'ny hahatongavany eo aminao. Ny fahavalo tsirairay dia manana loko, ka raha mieritreritra fa avy any Mars izy ireo dia diso. Ireo loko ireo dia aseho amin'ny hexadecimal, fa ny iray amin'izy ireo ihany no hisy fiantraikany amin'ny bala-nao.
Eo am-pilalaovana ny lalao, ny lalao dia mampiseho ny kaody hex misy loko ary asaina mikendry ny mpanafika izay miloko mifanaraka amin'ny kaody ianao. Mampiankin-doha amin'ny devoly ny lalao. Hahafantatra loko maro araka ny nolazainao ve ianao?
Alefaso ny typeface Serif
Tena mampihomehy ity lalao ity. Tsy maintsy mitifitra eo afovoan'ny ranomasina taratasy ho an'ireo izay avy ao amin'ny fianakaviana ianao Sans Serif. Priori, mahafantatra ny tonony toa mora. Sarotra ny habetsaky ny litera apetrany aminao, arakaraka ny faharetan'ny fotoana anananao sy ny fitovizany. Amin'ny tanana tsirairay, ho fanampin'izay, afaka mihena hatramin'ny 7 farafaharatsiny farafaharatsiny amin'ny ambaratonga mora indrindra ianao. In-4 amin'ny ambaratonga antonony ary in-2 fotsiny! amin'ny ambaratonga ambony. Toy ny mitranga amin'ny fotoana. Efa hitanao ve ny fahasarotany?
Ireto lalao dimy ireto dia natao hianarana amin'ny fomba mahafinaritra sy mifaninana. Noho ny isa azon'izy ireo, miaraka amin'ny namanao, hiditra amin'ny adihevitra momba izay mahazo isa tsara indrindra ianao. Azonao atao ny mizara ary mianatra mianatra mampiasa tsara ny fahaizanao amin'ireo lalao dimy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Lalao dimy hianarana hampiasa fitaovana famolavolana sary
Ny tetikasanao rehetra dia manana vidiny ao amin'ny Fiverr